သင်၏ Aliexpress အကောင့်ကိုမည်သို့ဖျက်မည်နည်း မိုဘိုင်းဖိုရမ်
သင်၏ Aliexpress အကောင့်ကိုမည်သို့ဖျက်ရမည်နည်း
Cristian Garcia | 24/09/2021 09:09 | အင်တာနက်ကို, လဲ tutorial
သင်ဆုံးဖြတ်သောအရာများစွာဖြစ်ပျက်နိုင်သည် သင်၏ Aliexpress အကောင့်ကိုဖျက်ပါ၀ ယ်ယူမှုတစ်ခုကြောင့်စိတ်မ ၀ င်စားခြင်း (သို့) အွန်လိုင်းစတိုးမှဘယ်တော့မှ ၀ ယ်ဖို့ဘယ်တော့မှမဆုံးဖြတ်ခြင်းအပါအ ၀ င်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းသည်လူသိအများဆုံးအွန်လိုင်းစတိုးများ (သို့) ecommerce ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းသင်၏အကြောင်းပြချက်များကိုကောင်းစွာဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းထားနိုင်ပါသည်။ မင်းကမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒေတာပိုင်ရှင်ဖြစ်လို့၊ ဒါကိုလည်းအကြောင်းပြစရာမလိုဘဲပိုတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ဒေတာတွေကို Aliexpress ဒေတာဘေ့စ်ထဲမှာမကျန်ခဲ့အောင်နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ website ကနေဘယ်လိုစာရင်းသွင်းမလဲဆိုတာကိုငါတို့သင်ပေးမယ်။
မင်းအဲဒါကိုပိတ်လိုက်ရင်မင်းရဲ့ဒေတာတွေကို Aliexpress ဒေတာဘေ့စ်မှာရှိနေသေးတယ်လို့ထင်ရင်မင်းကတောင်သံသယဝင်နိုင်တယ်၊ အဲဒါကမင်းအရာအားလုံးကိုအမြဲတမ်းဖျက်ပစ်လိုက်ဖို့သေချာစေချင်လို့ပါ။ မင်း Aliexpress ကိုမင်းအကောင့်ဖျက်ရင်တောင်ဒီဒေတာတွေကိုသူ့ရဲ့တရားဝင်ဒေတာဘေ့စ်ကနေလုံးဝဖယ်ရှားပစ်ဖို့ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကနေတောင်းခံလိမ့်မယ်။ ငါတို့ကမင်းအကောင့်ကိုဖျက်ဖို့ခေါ်သွားမှာဘဲ ထို့နောက်ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်၏လုံခြုံရေးအပိုင်း၌၎င်းကိုသင်တောင်းဆိုရပါလိမ့်မည်မရ။ စိတ်မပူပါနဲ့ဆောင်းပါးရဲ့အဆုံးမှာဒီအတိုလမ်းညွှန်လည်းရှိလိမ့်မယ်။
1 Aliexpress တွင်အကောင့်ကိုမည်သို့ဖျက်ရမည်နည်း။
1.1 ကွန်ပျူတာမှ Aliexpress အကောင့်ကိုဖျက်ပါ
1.2 မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမှ Aliexpress အကောင့်ကိုဖျက်ပါ
ငါတို့ပြောသည့်အတိုင်းသင်၏ Aliexpress အကောင့်ကိုဖျက်ရန်သင်သည်တရားဝင် ecommerce ၀ က်ဘ်ဆိုက် (သို့) မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတစ်ခုတည်းဖြင့်၎င်းကိုနှစ်နေရာမှ၎င်းပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဆိုက်နှစ်ခုစလုံးမှာမင်းကတရားဝင်နည်းလမ်းတွေနဲ့လုပ်ရမှာ။ ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးမှာအသေးစိတ်အချက်အလတ်တွေရှိပြီးအကောင့်ကိုအပြီးတိုင်ဖျက်ပစ်တဲ့အထိရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြသွားပါမယ်။
ကွန်ပျူတာမှ Aliexpress အကောင့်ကိုဖျက်ပါ
အကောင့်ဖျက်ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်စိတ်မပူပါနဲ့။ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များအတိုင်းလိုက်ရန်သာလိုလိမ့်မည်။ သင်ပထမဆုံးလုပ်သင့်သည်မှာတရားဝင် Aliexpress ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်သွားပြီးသင်၏ username နှင့် password ဖြင့် log in လုပ်ပါ။ သင်ပုံမှန်နှင့်လက်ရှိ ၀ ယ်ယူမှုပြုလုပ်နေသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဒီကနေဒီအဆင့်တွေကိုလိုက်နာပါ။
သင်၏ Aliexpress profile ကိုခေါ်ပါ ကျွန်ုပ်၏ Aliexpress
ယခုသင်၏ profile data ကိုတည်းဖြတ်သည့်အခါအကောင့်ကိုပိတ်ရန်အပြာခလုတ်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်အင်္ဂလိပ်လိုသုံးလေ့ရှိသော်လည်း၊ "အကောင့်ပိတ်"
အခုမင်းအတွက်လိုအပ်မယ့်အရာကအဲဒါပဲ အကောင့်ပိတ်ခြင်းကိုအတည်ပြုပါ ထို့နောက်သင်၏အကောင့်ကိုအဘယ့်ကြောင့်ရပ်ဆိုင်းလိုရသည့်အကြောင်းရင်းကဲ့သို့သင်မည်သို့ဖြည့်ရမည်ကိုသိနိုင်မည့်အခြားအခြေခံအချက်အလက်အချို့ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဒီနေရာတွင်မင်းရဲ့အီးမေးလ်ကိုလုံးလုံးလျားလျားလင့်ခ်ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့မင်း Aliexpress နဲ့ပိုသက်ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးအချက်အလတ်တွေဘယ်တော့မှရနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။
ဤအဆင့်များအားလုံးကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်သင်၏အကောင့်တစ်ခုလုံးနှင့်၎င်း၏အသုံးပြုခွင့်ကိုလုံးဝဆုံးရှုံးလိမ့်မည်ကိုသတိပြုပါ။ Aliexpress ecommerce နှင့်၎င်း၏ပိုင်ရှင် Alibaba တို့တွင်သင်ပြုလုပ်ခဲ့သောသင်၏အဆက်အသွယ်များ၊ စာများနှင့်ထုတ်ဝေမှုများအားလုံးကိုသင်ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့တောင်းဆိုချက်အားလုံးကို နောက် ၂၄ နာရီအတွင်းစီမံဆောင်ရွက်ပါမည် ဒါကြောင့်သင်ဝင်နိုင်သေးရင်ဘာမဆိုဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမှ Aliexpress အကောင့်ကိုဖျက်ပါ
မင်းရှာနေတာကမင်းရဲ့ Aliexpress အကောင့်ကိုမင်းရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းကနေဖျက်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လိုက်နာရမယ့်အဆင့်တွေအားလုံးဟာမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာကနေအရင်လုပ်ဖူးတာနဲ့တူတာကိုမင်းသဘောပေါက်လိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ၎င်းကိုသင်ဖုန်းမှဖျက်လိုလျှင်သိရန်သေးငယ်သည့်အဆင့်တစ်ခုရှိသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းကိုသင်ဖျက်လိုလျှင် desktop version ကိုတောင်းခံရန်လိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုလုပ်ရလိမ့်မည် မင်းက PC ကလုပ်ပေမယ့်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းပေါ်မှာလုပ်နေသလိုပဲမရ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလိုက်နာရပါလိမ့်မယ်။
သင် browser tab ကိုဖွင့ ်၍ ထိုနေရာမှ Enter နှိပ်ပါ Aliexpress ဝက်ဘ်ဆိုက်
ကဲ setting ထဲကိုသွားလိုက်ပါ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်.
ဤနေရာတွင်သင်အမှတ်အသားလုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာရှိလိမ့်မည် ကွန်ပျူတာမြင်ကွင်း ၎င်းသည်ကွဲပြားစွာရေးနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အမြဲတူလိမ့်မည်။
ယခုသင်ဖတ်ထားသောအဆင့်များအားလုံးကိုလိုက်နာပါ PC မှ Aliexpress အကောင့်ကိုဖျက်ရန်စာပိုဒ်များအထက်.
အကယ်၍ မင်းကမင်းရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းကနေကွန်ပျူတာဗားရှင်းကိုရှေ့ဆက်ချင်ရင်အချိန်မရွေးမင်းကိုအမေးခံရရင်ဟုတ်တယ်လို့ပြန်ဖြေဖို့လိုလိမ့်မယ်။ Aliexpress အက်ပလီကေးရှင်းရှိခြင်းအားဖြင့်မင်းရဲ့အကောင့်ကို Aliexpress ကနေဖျက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မတွေးပါနဲ့ ဒါကိုသူတို့ဘယ်တော့မှခွင့်မပြုဘူး။
ငါတို့အရင်ပြောခဲ့သလိုဘဲ၊ တစ်ခုကအကောင့်ကိုဖျက်ဖို့၊ နောက်တစ်ခုကမင်းရဲ့ဒေတာတွေကိုဖျက်ပြီးအမြဲတမ်းဖျက်ပစ်ဖို့ဘဲ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကအဲဒါဖြစ်ရမယ် Aliexpress သီးသန့်လုံခြုံရေးစာမျက်နှာမှ ယခုသင်သည်သင်၏ PC သို့မဟုတ် mobile browser မှ၎င်းကိုပြုလုပ်ရလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်း၌ရှိနေလျှင် desktop version ကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်အသက်သွင်းရန်လိုအပ်သည်ကိုသတိပြုပါမရ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာမှ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲအကြံပြုသည်၊ ၎င်းသည်ပိုအဆင်ပြေသည်။ သင့်အကောင့်ကိုဖျက်ရန်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာရပါမည်။
ရိုက်ထည့်ပါ Aliexpress ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအပိုင်း ၎င်းနောက်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Aliexpress အကောင့်ဖြင့် ၀ င်ပါ
ယခုသင်ရပါလိမ့်မယ် ငါ့အကောင့်ကိုဖျက်ပါဟုပြောသောခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်“ ငါ့အကောင့်ကိုဖျက်ပါ”
သတိပေးချက်ပေါ်လာလျှင်ပင်၎င်းကိုလျစ်လျူရှုပါ ထပ်နှိပ်ပါ မင်းရဲ့အကောင့်ကိုဘာဖျက်ချင်လဲ။
ယခုသင်ရပါလိမ့်မယ် သင်၏ဆက်စပ်အီးမေးလ်ကိုဖွင့်ပါ ပြီးတော့မင်းကသူတို့ကမ်းလှမ်းတဲ့အတည်ပြုကုဒ်ကိုထုတ်ယူပြီးအဲဒါကိုညွှန်တဲ့နေရာမှာ Aliexpress မှာထည့်ပါ
ယခုနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနှင့်သင်သူတို့ရှေ့တွင်ထားခဲ့သောအရာအားလုံးကိုလက်ခံရလိမ့်မည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ“ သဘောတူသည်” (သို့) အတည်ပြုခြင်းအားဖြင့်မူအားဖြင့်၎င်းကိုအများအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်ပြီးပါကအခြား ၀ င်းဒိုးတစ်ခုပေါ်လာလျှင်သင်ထပ်မံရွေးရပါလိမ့်မည် "ငါ့အကောင့်ကိုဖျက်" ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဤအချိန်၌သင်သည်သင်၏ Aliexpress အကောင့်ကိုဖျက်ပြီးပြီဟုသင့်အားပြောရမည်။ သင်မတတ်နိုင်သောကြောင့်ယခုနောက်မဆုတ်ပါနှင့်။ အမှန်တော့၊ သင်လုံးဝအသစ်တစ်ခုခုဖြင့်အကောင့်သစ်ဖြင့်ပြန်စရမည်။ သူတို့ကမင်းနဲ့သူတို့ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ဆက်ဆံရေးမှန်သမျှကိုပပျောက်အောင်ဆက်သွားလိမ့်မယ်လို့တွေးပါ။ Alibaba ၏ဒေတာဘေ့စ်မှလာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်းသင်၏အချက်အလက်အားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်Aliexpress ecommerce ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါးသည်အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ပြီးလိုက်နာရမည့်အချက်များမှာအလွန်ရိုးရှင်းကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ နောက် Mobile Forum ဆောင်းပါးမှာတွေ့မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အင်တာနက်ကို » သင်၏ Aliexpress အကောင့်ကိုမည်သို့ဖျက်ရမည်နည်း
WIA driver အမှားကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ